Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fifampiraharahana, tandra vadin’ny hoditra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fifampiraharahana, tandra vadin’ny hoditra
Adino tanteraka eo amin’ny fiainana andavan’andro ny maha ota ny fifampiraharahana izay matetika fomba ahafahana mandingana ny fepetra sy lalàna izay lamina mandravona ny fiarahamonina. Lasa toy ny fifandraisana amin’ny alalan’ny fihavanana na noho ny fahalalam-pomba ao anatin’ny firaisan-kina ny fitsikombakombana mikasika hetsika fihoaram-pefy. Tsy resaka mangina intsony indraindray ny tolotra sy ny ady varotra ifanaovana. Ary misy aza pi-maso fotsiny dia ampy andraiketana ny fifanarahana.
Raha ohatra eny amin’ny seranam-piaramanidina eny Ivato dia tsy miafina fa ampahibemaso izao no tonga manera izao karazan’olona izao, maka fanahy ny mpandeha vao tonga momba ny famoahana entana tsy misy gidragidra na fisavana akory aza. Ampandalovana skanera dia samy vita na inona na inona ao anaty valizy hoy ny mpandresy lahatra. Ny olona koa efa reraky ny dia nandritra ny adiny folo sy monamonainan’ireo fisavana taratasy eo am-pidirana no avy eo sorenan’ny fiandrasana entana ela loatra hany ka dia zarany aza afak’olana amin’ny fisavana entana dia manaiky na tsy mitondra entana voarara aza any anatin’ny valiziny.
Izany hoe misy ny kolikoly fialana fotsiny amin’ny mety fisiana fahasorenana. Izay anefa na tsy fahotana manefa fanimbihana ny anjara ho an’ny fanjakana, dia naman’ny fanotana fanetribe an’ny firenena noho ny fitezainy toe-tsaina amin’ny fanazarana fihoarana fefy sy ny fanitsakitsahana lalàna. Misy vidiny ny fahafahana manota toy izany. Tsy misy vidiny intsony ary very hasina ny fepetra sy lalàna. Mivarina any amin’ny fanjakan’ny Baroa ny fifehezana
ao amin’ny fiarahamonina. Any anatin’ny antsana sahala amin’izany no nilatsaka ny firenena ankehitriny. Samy mandeha samy mitady. Izay voakapa mangina, very anjara ny atao hoe rariny.
Ny fiverenan’ny rariny mba hahafahan’ny mareforefo sy mahantra ny anjarany no fiovana iandrandran’ny maro. Ny rehetra dia tsy maintsy indray andro hifanena amin’ny matanjaka noho izy na eo amin’ny hery ara-batana izany na noho ny onjan’ny vola. Marina fa ny olona tsirairay no tsy maintsy hifehy tena ary hanova toe-tsaina mba tsy hikaroka lalandava fomba sy làlana hisangodinana ny lalàna. Akory anefa no atao raha ny any an-tampony no manampatra fahafahany amin’ny fandikana lalàna ? Lasa izay ny fomba mipetraka. Mba tsy hizakana ny vokatr’izay dia ireo lehibe no tsy maintsy voalohany ho voafehin’ny lalàna. Noho izany, an’ny vahoaka no mifantina ireo olona azony antoka fa hametraka ny lalàna ho ambonin’ny rehetra. Olona vonona amin’ny fampiantoana ny fanjakazakana sy fanaovana ny tsy rariny, ka ho tapitra eo izany hoe tsimatimanota, na sanatria aza tsy azo ho tsaraina akory.